किन लिने मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघको सदस्यता | Makwanpur Chamber of Commerce & Industry (MCCI)
किनभने संघको सदस्य हुनुभयो भने तपाईले निम्नानुसारका सेवा तथा सुविधा उपभोग गर्न पाउनु हुनेछ ।
तपाईको व्यवसायमा परेको व्यक्तिगत व्यवसायिक समस्या समाधान गर्ने संघ एउटा ठूलो शक्ति हो जसलाई तपाईले उपयोग गर्न सक्नुहुनेछ ।
संघको सदस्य हुनुभएमा तपाईले आफ्नो व्यवसायको संरक्षकको रुपमा संघलाई पाउनुहुनेछ ।
संघले प्रदान गर्ने विभिन्न सेवामूलक कार्यहरुमा तपाईले सहुलियत पाउनुहुनेछ ।
संघ मार्फत विभिन्न राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरुसंग सम्बन्ध विस्तार एवं व्यक्तिगत पहिचान बनाउने अवसर पाउनुहुनेछ ।
संघले बेलाबेलामा प्रकाशित गर्ने बुलेटिनहरु, मेम्बर्स डाइरेक्टरीहरुबाट जानकारी लिन पाउनका साथै त्यसै मार्फत आफ्नो व्यवसायको जानकारी अरुलाई प्रवाह गर्न पाउनुहुनेछ ।
संघ विभिन्न सामाजिक कार्यमा प्रत्यक्ष रुपमा समाहित हुने अवसर पाउनुहुनेछ ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ तथा संघलाई विभिन्न समयमा प्राप्त हुने छात्रवृत्तिहरुमा राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलनहरुमा सहभागी हुने अवसरहरु पाउन सक्नुहुनेछ ।
आफ्नो क्षेत्रभन्दा बाहिर रहेका व्यवसायिक प्रतिष्ठानसंग सम्पर्क स्थापना गर्ने अवसर पाउन सक्नुहुनेछ ।
सरकारी नीति निर्माणमा संघले सरकारलाई दिने सरसल्लाह तथा सुझावमा यहाँ स्वयं सहभागी भई संघलाई सल्लाह प्रदान गर्न सक्नुहुनेछ ।
संघले समय समयमा संचालन गर्ने तालिम, गोष्ठी तथा अन्य विभिन्न किसिमका अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरुमा सहभागी भई आफ्नो सीप तथा क्षमता अभिबृद्धि गर्न सक्नुहुनेछ ।
संघको सदस्य भएपछि उद्योगी तथा व्यापारीहरुको सञ्जाल भित्र पसिने हुनाले सो सञ्जालभित्र आफ्नो व्यवसाय विकास तथा विस्तार गर्न पाउनुहुनेछ ।
संघका सदस्यहरु बीच वा अन्य कसैसंग व्यवसायिक मनोमालिन्यको अवस्था सिर्जना भएको खण्डमा संघलाई मध्यस्थकर्ताको रुपमा पाउनुहुनेछ । त्यसैले, आजै मउवासंघको सदस्य किन नबन्ने ? सदस्य बनेर आफ् पनि मजबुत बन्नुहोस् र संघलाई पनि मजबुत बनाउनुहोस् । आज तपाईलाई समस्या नपरेको हुनसक्छ, तर समस्या पर्दा मात्र खोजेर कहाँ पाइन्छ र ? त्यसैले सदस्य बन्न ढिलाई नगर्नुहोस् भने सदस्य बनिसकेकाहरुले नियमित नविकरण गरी ढुक्क हुनुहोस् ।
कसले संघको सदस्यता लिन सक्छन् त ?
मकवानपुर जिल्लामा उद्योग/ब्यबसाय क्षेत्रमा संलग्न तथा ब्यबसायिक उदेश्य भएका नेपाल सरकारमा दर्ता रहेका फर्महरुले यस संस्थाको सदस्यता लिन सक्छन् ।
सदस्यता लिन के गर्नुपर्दछ त ?
सदस्यता लिनको लागि संघबाट प्रदान गरिएको सदस्यता आवेदन फारम भर्नु पर्दछ, जसमा निम्नानुसारका कागजातहरु संलग्न हुनुपर्दछ ।
नेपाल सरकारको उद्योग मन्त्रालय, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, जिल्ला घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, वा वाणिज्य विभाग तथा आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा दर्ता भएका उद्योग/फर्म/कम्पनी प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि १ प्रति ।
नागरिकता प्रमाणपत्रको सक्कल तथा प्रतिलिपि १ प्रति ।
साझेदारी व्यवसायको हकमा साझेदारको आधिकारिक पत्र ।
हालसालै खिचिएको अटोसाईज वा पासपोर्ट साईजको फोटो २ प्रति ।